စားပွဲထိုးအမျိုးသမီးငယ်ကို . ပြုကျင့်ပြီးဆေးတိုက်ရာမှ သွေးသွန်ပြီး သတိမရသည့်အတွက် ဆေးရုံတင်လိုက်ရ
တမူးမြို့ မြို့မ12/ခ ရပ်ကွက်နေ ဦးဝင်းဇော်-ဒေါ်စန်းစန်းအေး၏သမီးဖြစ်သူ မဖြူနှင်းသာအသက် 13-2 နှစ်သည်တမူးမြို့နန်းဖါလုံ ချမ်းငြိမ်းသာ စားသောက်ဆိုင်တွင် စားပွဲထိုးဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေ သည်မှာ တနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါသည်။
8-11-2019 နေ့တွင် သွေးသွန်ပြီး သတိမရသည့်အတွက် တမူးဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရာဆေးရုံ၌ အခြေအနေမကောင်းသည့် အတွက် ဗိုက်ခွဲကုသလိုက်ရပါသည်။
12-11-2019 ညနေ-4-နာရီတွင် သတိရသည့်အချိန် မေးကြည့်ရာ ဆိုင်ရှင်၏ လူယုံတော်ဖြစ်သော ဦးစွန်း အသက်(50)ကျော်ဆိုသူမှ ဒါးထောက်ပြီး ရင်သားတွေကိုကိုင်ပြီး သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကြောင်း လူကြီးများကို ပြန်ပြောပါက သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသည့် အတွက် ဘယ်သူ့မှမပြောရဲကြောင်းပြောပြသိရှိခဲ့ပါသည်။
ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးမှ ဆေးများတိုက်ကြောင်း ဆေးအကောင်းစားဟု ပြော၍ သောက်ခဲ့ရာ မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာသည့်အတွက် မိဘများအားအကြောင်းကြား၍ တမူးဆေးရုံသို့တင်ပို့လိုက်ရကြောင်း သိရပါသည် ။
မဖြူနှင်းသာမှာ ဆိုင်ရှင်၏လူယုံတော်ဖြစ်သူ ဦးစွန်းဆိုသူမှအလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခြင်းခံရသည်ဟု သိရသဖြင့် မိဘများမှ 13-11-2019-ရက်နေ့ ညနေ-5-နာရီအချိန်တွင် တမူးမြို့မရဲစခန်းသို့ အရေးယူပေးပါရန် သွားရောက်တိုင်ကြားကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပါသည်။
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဖြစ်နေပါသဖြင့် အမူမှန်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီရှယ်ပေးကြပါ။သွေး(6)ပုလင်းသွင်း၍ ကလေးအသက်ကိုတော့ ကယ်နိုင်လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဦးဇော်ဝင်း တမူးဇွဲမာန် . .နေပြည်တော်တိုင်း(မ်)မီဒီယာအဖွဲ့ မှု့ခင်းနှင့်သတင်းစုံ အသင်းအဖွဲ့ချုပ် တမူးမြို့။